का’मुक भङ्गेरा: जसले दैनिक ३ सय पटकभन्दा बढी यौ’नस’म्पर्क गर्छ | का’मुक भङ्गेरा: जसले दैनिक ३ सय पटकभन्दा बढी यौ’नस’म्पर्क गर्छ – हिपमत
का’मुक भङ्गेरा: जसले दैनिक ३ सय पटकभन्दा बढी यौ’नस’म्पर्क गर्छ
यौ नउ त्तेजना बढाउन भङ्गेरा खाने चलन अझै छ । भङ्गेरा खाँदा यौ न उ’त्तेजना बढ्ने सोच राख्नेहरु परापूर्व काल देखि नै थिए
भङ्गेरा का’मुक चरा ! महान नाटककार से’क्सपियरले भङ्गेरालाई यौ न कार्यसँग जोडेका छन् । भङ्गेरा त्यस्तो प्राणी हो जसले दैनिक तीन सय पटकभन्दा बढी यौ न सम्पर्क गर्छ । मान्छेको वस्तीसँगै रहने चञ्चले सानो चरा भङ्गेरामा आखिर त्यस्तो के शक्ति छ ? वैज्ञानिकहरुले यसबारे अनुसन्धान नगरेका होइनन् । यौ नउ त्तेजना बढाउन भङ्गेरा खाने चलन अझै छ । भङ्गेरा खाँदा यौ न उ’त्तेजना बढ्ने सोच राख्नेहरु परापूर्व काल देखि नै थिए ।
जडिबुटिका ज्ञाता निकोलस कुलपिपरले भङ्गेराको गि’दीले यौ’न उ’त्तेजना बढाउने उल्लेख गरेका छन् । उनको तर्कलाई आधार मान्दा भङ्गेराको टाउ’को खा’नाले उत्ते’जना बढाउँछ । विगत देखि नै उत्ते’जना बढाउन भङ्गेराको टाउको खानेहरु थिए ।
सबैभन्दा बढी सम्प’र्क प्रजननको समयमा हुनेगर्छ । सरदर दैनिक तीन सय पटक भन्दा बढी स’म्पर्क भने गरेकै हुन्छ
भङ्गेरामा अद्भूत यौ’न शक्ति हुन्छ । पोथी भङ्गेराले प्रजन’नका समयमा भालेमाथि प्र’भुत्व जमाउने गर्छे । सन् २००० मा जोडी एम. जओरले अक्सफोर्ड जर्नलमा प्रकाशित गरेको लेखमा पोथीले भालेमाथि प्रज’जनका बखत जमाउने प्रभु’त्वबारे उल्लेख छ ।
तापक्रम र मौसमले पनि भङ्गेराको यौ न सम्पर्कको संख्यामा फरक पर्दछ । सबैभन्दा बढी स’म्पर्क प्रजननको समयमा हुनेगर्छ । सरदर दैनिक तीन सय पटक भन्दा बढी सम्पर्क भने गरेकै हुन्छ । एक अर्काको जोडीसँग दैनिक सयौं पटक यौ न सम्पर्क गर्छन् ।